အိပျမပြျောသူမြားအတှကျ အကောငျးဆုံး အိမျတှငျးဆေး နို့နနှငျးဖြျောရညျ – Daily Feed MM
အိပျမပြျောသူမြားအတှကျ အကောငျးဆုံး အိမျတှငျးဆေး နို့နနှငျးဖြျောရညျ
Admin_John | July 14, 2020 | Healthy | No Comments
အိန်ဒိယလူမြိုးတှေ မှာ အနောကျတိုငျး အရှတေို့ငျး နိုငျငံပေါငျးစုံနဲ့ မတူတဲ့ ဆေးဘကျဆိုငျရာ အယူဝါဒတှေ ကွှယျဝတယျ ။ သူတို့ဆီက ဆေးနညျး မြားစှာမှာ ထိပျဆုံးမှာ နံပါတျတဈနရော မှာ ရှိနတေဲ့ ဆေးတပါးကတော့ နို့နနှငျးပါ
ပဲ ။နနှငျးဟာ ခန်ဒာကိုယျနာကငျြ ပငျပနျးခွငျး ၊ဖြားနာကိုကျခဲခွငျး ၊ အလုပျပငျပနျးခွငျးတို့ အတှကျ အထူးကောငျးမှနျတဲ့ ဓာတျစာ ဖွဈပါတယျ ။ အဆဈမွဈယောငျနတောတှရှေိရငျ ဆေးသောကျစရာ မလိုပဲ ပြောကျသှားမှာပါ ။စာ
အိမျအခဉျြပေါကျနတောတှေ အစာမကွဖွေဈနတောတှေ အတှကျလဲ အလှနျကောငျးတဲ့ ဆေးတပါးပါ ။ ဘိုကျပွညျ့ဘိုကျကယျနတောတှေ အတှကျတော့နတျဆေးတပါးပါပဲ။တခါတလဗေိုကျပွညျ့ဗိုကျကယျတာနရေထိုငျရခကျတဲ့ အပွငျ
လေးလံ ထိုငျမှိုငျးပွီး မပြျောတဲ့ ရောဂါ ကို ခံစားရပါတယျ ။ လူကွညျ့လိုကျရငျလဲ ဖွတျလတျမှုမရှိပဲ ဗိုကျကွီးပူပွီး အပငျပနျးမခံနိုငျဘူး ။ ဒါဆိုရငျ နိ့နနှငျးသောကျပါ ။အစာအိမျတှငျးမှာ ရှိတဲ့ အပူနာတှကေိုလဲ သကျသာပြောကျကငျး
စပေါတယျ ။မလြေ့ော့ခွငျးမြား ကိုလဲ သကျသာလာစပေါတယျ ။သဘာဝ အယောငျကဆြေး ၊ သဘာဝ အငျတီဘိုငျအိုးတဈ ၊ သဘာဝအနာကကျြဆေး ၊ သှေးသနျ့ဆေး ၊ အသားအရအေတှကျအားဖွညျ့ဆေး လဲဖွဈပါတယျ ။ာငျးဆိုး
ခွငျးနဲ့ ဆုံဆို့ ကွကျညှာခြောငျးဆိုး တှကေိုလဲ သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ ။ကိုလှစောလို့ချေါတဲ့ သှေးတှငျးအဆီဓာတျ ကိုလကျစထရော ကိုလဲ ကစြပေါတယျ ။ ခုခတျေမှာ အသကျ ၃၀ ပတျဝနျးကငျြတှကေ အစ ကိုလကျစ
ထရော မြားတဲ့ ဒုက်ခကို ကွုံတှေ့ နရေပါတယျ ။ဆရာဝနျက ပွောလာပွီ ဆိုရငျတော့ ဆေးတှေ သောကျနမေယျ့ အစား ဒီနို့နနှငျးလေး ကောကျဖြျောသောကျလိုကျရငျ အဆငျပွမေယျ ထငျတယျနျော ။အကျကဇီမား စတဲ့ အရပွေား
ယောငျကမျးယားနာတာတှအေတှကျလဲ အလှနျကောငျးတဲ့ဆေးပါ ။ရငျသားကငျဆာ ၊ ပရိုစတိတျလို့ချေါတဲ့ ဆီးကြိတျကငျဆာ ၊ အရပွေားကငျဆာ ၊ အူမကွီးကငျဆာ ၊ အကြိတျကငျဆာ နဲ့ သှေးကငျဆာတှဖွေဈခွငျးမှလဲ ကာကှယျ
ပေးပါတယျ ။အဆီခွဖေကျြနှုနျး ကို ကူညီပေးသလို ခန်ဒာကိုယျ အလေးခြိနျထိနျးခွငျးကိုလဲ အကူညီပေးပါတယျ ။အသညျးမှာ မြားလာတဲ့ အဆိတျအတောကျတှေ ဖယျရှားရာမှာလဲ အသုံးဝငျတဲ့ အပွငျ သှေးခြို ဆီးခြိုကိုလဲ ထိနျးခြုပျ
ပေးပါတယျ ။ကငျဆာဝဒေနာသယျမြား အတှကျ ကုထုံးဖွဈတဲ့ Chemotherapy ခမျမို ဓာတျကငျခွငျးကွောငျ့ဖွဈတတျတဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမြားတှရေ့ခွငျးကိုလဲ လြော့နညျးစပေါတယျနျော ။ဒီလောကျကောငျးတဲ့ နနှငျးဟာ သငျ့
လကျတကမျးမှာ ရှိနတောပါ ။ မသိသူကြျောသှား သိသူဖျောစားတဲ့ ။ နနှငျးကို အဝငျကောငျးအောငျ လုပျနညျး အမြိုးမြိုးတော့ ရှိမှာပါ ။ ကတိသစ်စာတညျသောအခါ နှယျမွငျသဈပငျ ဆေးဘကျဝငျသညျလို့ အဆိုရှိတဲ့ အတှကျ
ကွောငျ့ သစ်စာရှိသော ရောငျးတဲ့ အသညျဆီက နနှငျးမှုနျ့ အစဈကိုတော့ ဝယျဘို့လိုပါလိမျ့မယျနျော ။ နိ့မို့ရငျ ဆနျမှုနျ့ကို အဝတျဆိုးဆေး ဆိုးထားတာတှနေဲ့ တှရေ့ငျ…. ပြောကျတော့ ပြောကျတယျ အသကျဖွဈနပေါဦးမယျ ။ဒီ
ဆေးနညျးက အိန်ဒိယရိုးရာ ဆေးနညျးဖွဈပမေယျ့ မွနျမာ့ ရှေးနညျးလဲဖွဈပါတယျ ။ တိမျမွုတျပြောကျကှယျနတေဲ့ Golden recipe လေးပါ ။ ရှေးက မီးဖှားပွီးတဲ့ မိခငျတှေ အတှကျ အပူအပုတျတှေ စငျသှားအောငျ နနှငျးကို
လုံးပွီး ဒီတိုငျးသောကျခဲ့ရတာပါ ။နနှငျးရဲ့ အာနိသငျတှေ က အငျတီဘိုကျအိုတဈ အငျတီဆကျပတဈ ဖွဈတယျ အယောငျအယမျးကတြယျ ၊ အပုတျစငျတယျ သှေးလညျပတျမှု ကောငျးတယျ ဆိုတော့ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှေ
ပွနျလညျ သုံးစှဲသငျ့တဲ့ဆေးပါ ။အနာလဲ ကကျြတယျ ၊ ဖောယောငျတာတှလေဲကတြယျ ၊ လနေဲ့ ပတျသတျတဲ့ရောဂါတှလေဲ နိငျပါတယျ ဆိုတော့ ကမြတော့ ခလေးမှေးထားသူ မဟုတျပမေယျ့ စမျးသောကျဘို့ ကွံစညျနပေါပွီ။
ဖြျောနညျးလေးကတော့နှားနို့နှေးနှေးလေးပဲဖွဈဖွဈ သာမာနျ အပူခြိနျပဲဖွဈဖွဈ..တခှကျပဲ အရငျထညျ့ပါမယျ ။ပြားရညျစဈစဈ တဇှနျး (သို့) ကွိုကျသလောကျထညျ့ အခြိုကွိုကျရငျ ပိုထညျ့နနှငျးမှုနျ့ စဈစဈ ကျောဖီ ဇှနျးဖြားလေးနဲ့
တဝကျ အနံ့မှေးအောငျ သဈဂဘြိုးမှုနျ့လေး ဇှနျးဖြားလေးနဲ့ နဲနဲလေးဂငျြးမှုနျ့ စီးတီးမတျမှာ ရနပွေီ အဲတာကလဲ ဇှနျဖြားလေးနဲ့ ကိုယျကွိုကျသလောကျသာထညျ့ ကမြကတော့ဂငျြးကွိုကျတယျပွီးရငျ ခေါကျမှပွေီးသောကျလို့ရပါပွီ ။အဓိက
ကတော့ ဂငျြးရယျ နနှငျးရယျ နှားနို့ရယျ ပဲကနျြတာကတော့ အနံ့ရယျ အရသာရယျက အဝငျကောငျးအောငျ လြှောကျထညျ့ကွတာပါ ။စမျးသောကျကွညျ့လို့ အဆငျမပွရေငျတော့ နနှငျးကို ပြားရညျနဲ့တပွေီး အခွောကျလှနျးပွီး
အလုံးလေးတှလေုံးပွီးသောကျမယျ ။တခြို့နညျးတှမှောလဲ အမှုနျ့ မရသူတှေ အတှကျ နနှငျးတတျ ဂငျြးတတျ နဲ့ ငရုပျကောငျးတှကေို နှားနို့ထဲထညျု့ပွီးမီးအေး အေးလေးနဲ့ ပှကျလာတဲ့ အထိကြိုပါ ။ပှကျပွီး ခဏလောကျနမေီးဖိုပျေါ
က ခပြွီး စားပှဲပျေါမှာပဲ အအေးခံထားပါ ။ နောကျအေးသှားပွီဆိုရငျ နို့ထဲက အဖတျတှေ ကိုဆယျထုပျပွီး ပြားရညျနဲ့ ရောသောကျနိုငျပါတယျ ။
Source ; Myo Min
အိန္ဒိယလူမျိုးတွေ မှာ အနောက်တိုင်း အရှေ့တိုင်း နိုင်ငံပေါင်းစုံနဲ့ မတူတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အယူဝါဒတွေ ကြွယ်ဝတယ် ။ သူတို့ဆီက ဆေးနည်း များစွာမှာ ထိပ်ဆုံးမှာ နံပါတ်တစ်နေရာ မှာ ရှိနေတဲ့ ဆေးတပါးကတော့ နို့နနွင်းပါ
ပဲ ။နနွင်းဟာ ခန္ဒာကိုယ်နာကျင် ပင်ပန်းခြင်း ၊ဖျားနာကိုက်ခဲခြင်း ၊ အလုပ်ပင်ပန်းခြင်းတို့ အတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်စာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဆစ်မြစ်ယောင်နေတာတွေရှိရင် ဆေးသောက်စရာ မလိုပဲ ပျောက်သွားမှာပါ ။စာ
အိမ်အချဉ်ပေါက်နေတာတွေ အစာမကြေဖြစ်နေတာတွေ အတွက်လဲ အလွန်ကောင်းတဲ့ ဆေးတပါးပါ ။ ဘိုက်ပြည့်ဘိုက်ကယ်နေတာတွေ အတွက်တော့နတ်ဆေးတပါးပါပဲ။တခါတလေဗိုက်ပြည့်ဗိုက်ကယ်တာနေရထိုင်ရခက်တဲ့ အပြင်
လေးလံ ထိုင်မှိုင်းပြီး မပျော်တဲ့ ရောဂါ ကို ခံစားရပါတယ် ။ လူကြည့်လိုက်ရင်လဲ ဖြတ်လတ်မှုမရှိပဲ ဗိုက်ကြီးပူပြီး အပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူး ။ ဒါဆိုရင် နိ့နနွင်းသောက်ပါ ။အစာအိမ်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ အပူနာတွေကိုလဲ သက်သာပျောက်ကင်း
စေပါတယ် ။မေ့လျော့ခြင်းများ ကိုလဲ သက်သာလာစေပါတယ် ။သဘာဝ အယောင်ကျဆေး ၊ သဘာဝ အင်တီဘိုင်အိုးတစ် ၊ သဘာဝအနာကျက်ဆေး ၊ သွေးသန့်ဆေး ၊ အသားအရေအတွက်အားဖြည့်ဆေး လဲဖြစ်ပါတယ် ။ာင်းဆိုး
ခြင်းနဲ့ ဆုံဆို့ ကြက်ညှာချောင်းဆိုး တွေကိုလဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ် ။ကိုလှစောလို့ခေါ်တဲ့ သွေးတွင်းအဆီဓာတ် ကိုလက်စထရော ကိုလဲ ကျစေပါတယ် ။ ခုခေတ်မှာ အသက် ၃၀ ပတ်ဝန်းကျင်တွေက အစ ကိုလက်စ
ထရော များတဲ့ ဒုက္ခကို ကြုံတွေ့ နေရပါတယ် ။ဆရာဝန်က ပြောလာပြီ ဆိုရင်တော့ ဆေးတွေ သောက်နေမယ့် အစား ဒီနို့နနွင်းလေး ကောက်ဖျော်သောက်လိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်နော် ။အက်ကဇီမား စတဲ့ အရေပြား
ယောင်ကမ်းယားနာတာတွေအတွက်လဲ အလွန်ကောင်းတဲ့ဆေးပါ ။ရင်သားကင်ဆာ ၊ ပရိုစတိတ်လို့ခေါ်တဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ၊ အရေပြားကင်ဆာ ၊ အူမကြီးကင်ဆာ ၊ အကျိတ်ကင်ဆာ နဲ့ သွေးကင်ဆာတွေဖြစ်ခြင်းမှလဲ ကာကွယ်
ပေးပါတယ် ။အဆီခြေဖျက်နှုန်း ကို ကူညီပေးသလို ခန္ဒာကိုယ် အလေးချိန်ထိန်းခြင်းကိုလဲ အကူညီပေးပါတယ် ။အသည်းမှာ များလာတဲ့ အဆိတ်အတောက်တွေ ဖယ်ရှားရာမှာလဲ အသုံးဝင်တဲ့ အပြင် သွေးချို ဆီးချိုကိုလဲ ထိန်းချုပ်
ပေးပါတယ် ။ကင်ဆာဝေဒနာသယ်များ အတွက် ကုထုံးဖြစ်တဲ့ Chemotherapy ခမ်မို ဓာတ်ကင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွေ့ရခြင်းကိုလဲ လျော့နည်းစေပါတယ်နော် ။ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ နနွင်းဟာ သင့်
လက်တကမ်းမှာ ရှိနေတာပါ ။ မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စားတဲ့ ။ နနွင်းကို အဝင်ကောင်းအောင် လုပ်နည်း အမျိုးမျိုးတော့ ရှိမှာပါ ။ ကတိသစ္စာတည်သောအခါ နွယ်မြင်သစ်ပင် ဆေးဘက်ဝင်သည်လို့ အဆိုရှိတဲ့ အတွက်
ကြောင့် သစ္စာရှိသော ရောင်းတဲ့ အသည်ဆီက နနွင်းမှုန့် အစစ်ကိုတော့ ဝယ်ဘို့လိုပါလိမ့်မယ်နော် ။ နိ့မို့ရင် ဆန်မှုန့်ကို အဝတ်ဆိုးဆေး ဆိုးထားတာတွေနဲ့ တွေ့ရင်…. ပျောက်တော့ ပျောက်တယ် အသက်ဖြစ်နေပါဦးမယ် ။ဒီ
ဆေးနည်းက အိန္ဒိယရိုးရာ ဆေးနည်းဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာ့ ရှေးနည်းလဲဖြစ်ပါတယ် ။ တိမ်မြုတ်ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ Golden recipe လေးပါ ။ ရှေးက မီးဖွားပြီးတဲ့ မိခင်တွေ အတွက် အပူအပုတ်တွေ စင်သွားအောင် နနွင်းကို
လုံးပြီး ဒီတိုင်းသောက်ခဲ့ရတာပါ ။နနွင်းရဲ့ အာနိသင်တွေ က အင်တီဘိုက်အိုတစ် အင်တီဆက်ပတစ် ဖြစ်တယ် အယောင်အယမ်းကျတယ် ၊ အပုတ်စင်တယ် သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းတယ် ဆိုတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ
ပြန်လည် သုံးစွဲသင့်တဲ့ဆေးပါ ။အနာလဲ ကျက်တယ် ၊ ဖောယောင်တာတွေလဲကျတယ် ၊ လေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ရောဂါတွေလဲ နိင်ပါတယ် ဆိုတော့ ကျမတော့ ခလေးမွေးထားသူ မဟုတ်ပေမယ့် စမ်းသောက်ဘို့ ကြံစည်နေပါပြီ။
ဖျော်နည်းလေးကတော့နွားနို့နွေးနွေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သာမာန် အပူချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်..တခွက်ပဲ အရင်ထည့်ပါမယ် ။ပျားရည်စစ်စစ် တဇွန်း (သို့) ကြိုက်သလောက်ထည့် အချိုကြိုက်ရင် ပိုထည့်နနွင်းမှုန့် စစ်စစ် ကော်ဖီ ဇွန်းဖျားလေးနဲ့
တဝက် အနံ့မွှေးအောင် သစ်ဂျဘိုးမှုန့်လေး ဇွန်းဖျားလေးနဲ့ နဲနဲလေးဂျင်းမှုန့် စီးတီးမတ်မှာ ရနေပြီ အဲတာကလဲ ဇွန်ဖျားလေးနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်သလောက်သာထည့် ကျမကတော့ဂျင်းကြိုက်တယ်ပြီးရင် ခေါက်မွှေပြီးသောက်လို့ရပါပြီ ။အဓိက
ကတော့ ဂျင်းရယ် နနွင်းရယ် နွားနို့ရယ် ပဲကျန်တာကတော့ အနံ့ရယ် အရသာရယ်က အဝင်ကောင်းအောင် လျှောက်ထည့်ကြတာပါ ။စမ်းသောက်ကြည့်လို့ အဆင်မပြေရင်တော့ နနွင်းကို ပျားရည်နဲ့တေပြီး အခြောက်လှန်းပြီး
အလုံးလေးတွေလုံးပြီးသောက်မယ် ။တချို့နည်းတွေမှာလဲ အမှုန့် မရသူတွေ အတွက် နနွင်းတတ် ဂျင်းတတ် နဲ့ ငရုပ်ကောင်းတွေကို နွားနို့ထဲထည့်ုပြီးမီးအေး အေးလေးနဲ့ ပွက်လာတဲ့ အထိကျိုပါ ။ပွက်ပြီး ခဏလောက်နေမီးဖိုပေါ်
က ချပြီး စားပွဲပေါ်မှာပဲ အအေးခံထားပါ ။ နောက်အေးသွားပြီဆိုရင် နို့ထဲက အဖတ်တွေ ကိုဆယ်ထုပ်ပြီး ပျားရည်နဲ့ ရောသောက်နိုင်ပါတယ် ။
သံပုရာသီးက ရနိုငျတဲ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား